JingPad A1, painosvika uye mamwe marongero pamusoro petafura inovimbisa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo ramangwana iARM. Uye ini handichataure kuti iLinux, nekuti isu tatoona kuti icho chinhu chinotaurwa gore rega uye hachimbobvisa sezvanga zvichitarisirwa, asi ndezvevashandisi vakaita seni, ivo, izvo, zvakare zvakapfuura. uye zviripo. Zvichavawo zvakadaro kune vakawanda maererano nemahwendefa, chimwe chinhu chichava chaicho nekuda kwemapurojekiti akadai sePINE64 kana iyo JingPad A1la piritsi iro rinotakura JingOS senge inoshanda system.
Kusvika parizvino isu taingoziva chete kuti JingOS yaishanda pahwendefa raizotakura mashandiro ayo uye Hardware iyo yaizokwira, kunyangwe PINE64 yakatidzidzisa kuti, mumidziyo yakadaro isina kukura, zvese zvinogona kuchinja isati yatanga kuburitswa zviri pamutemo. Kwemaawa mashoma, timu yevagadziri, kunyanya Liu, uyo akafanana neCommunity Manager, aburitsa zvimwe zvakawanda, kunyanya iyo mepu yemigwagwa uye nemazuva avachatora matanho.
Mugwagwa wekuuya kweJingPad A1
Chivabvu 31: yekutanga yemuviri vhidhiyo-ongororo yakaitwa nechikwata cheJingPad.
June 11: Mavhidhiyo ekutanga epiritsi nechitatu maTubers muChirungu neChinese, asi pasina keyboard-trackpad.
June 15: mushandirapamwe wekubhadhara mari unotanga.
June 25: kuongororwa kwevhidhiyo naYouTubers, asi panguva ino nekhibhodi-trackpad.
Chikunguru 17th: utsi bvunzo. Aya marudzi ebvunzo anoitwa kuti uone kuti software yacho inoshanda nemazvo pane Hardware iyo yakaiswa.
Nyamavhuvhu 10: Mahwendefa ekutanga zana achatumirwa kune vashandisi vekutanga.
Nyamavhuvhu 20: 300 mamwe anotumirwa.
Nyamavhuvhu 7: Kutakura kwakawanda kuchatanga.
Mune izvo zvinyorwa pamusoro apa unosuwa kuona mutengo. Ini ndingashinga kutaura kuti zvinoda chimwe chinhu (chaizvo) kupfuura iyo PineTab nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka: iyo PINE64 piritsi ndeye yakavhurwa sosi, saka unofanirwa kubhadhara marezinesi 0. Pane rimwe divi, Hardware iri pamusoro pamusoro, kutanga neGorilla Girazi, ichipfuura nesarudzo yepamusoro kwazvo uye ichipera nemakamera ayo. Muchokwadi, ndakapfupisa zvakanyanya izvo zviri mu Peji yemharidzo yeJingPad A1.
Chero zvazvingaitika, isu tatoziva kare kuti iyo Nyamavhuvhu 10 ichatanga kutumira, saka tichazoziva zvakawanda muzhizha, uye ndinofunga ndinoda imwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mamwe mashoko pamusoro peJingPad A1 anoburitswa, senge paachawanikwa kuti utenge